Lehilahy matin’ny pesta Nifandroritan’ny “BMH” sy ny fianakaviana
trangana savorovoro tao Tanambao V Toamasina ny talata alina. Antony dia voaporofo fa matin’ny pesta ny lehilahy iray ka nifamalian’ny fianakaviana sy ny BMH ny fikarakarana ny razana.
Voatery nampiasa hery mihitsy ny mpitandro ny filaminana nakana ilay razana vao afaka nandevina azy ho lavitry ny fianakaviany sy ny mpiaraha-monina ny BMH noho izy matin’ny pesta, ka tsy maintsy misy fepetra manokana ny fomba fandevenana azy.
Sakoroka hatreny am-pasana
Fantatra araka ny angom-baovao natao fa nisy fotoana narary ity lehilahy ity saingy tsy nanatona toeram-pitsaboana mihitsy, efa nisy aza fotoana nando ra izy io araka ny fanazavan’ny manodidina nefa tsy nentin’ireo fianakaviany namonjy toeram-pitsaboana hatrany ka izao maty ny talata teo izao. Tsy nijanona tamin’ity sakoroka tao Tanambao V ity anefa ny raharaha fa nitohy ny alarobia maraina teny amin’ny toeram-pandevenana Manangareza izay nandevenan’ny BMH azy. Tonga ny fianakaviany haka ny fatin’ny havany. Tonga teny koa ny Emmo-Rég nanakana izany ka mbola raikitra hatrany ny sakoroka. Nihenjana anefa ireto mpitandro ny filaminana fa hampihatra ny lalàna manan-kery raha tsy milefitra amin’ny tsy mety ataony ireto fianakaviana ireto; satria heloka bevava ny fangalarana faty amin’izay mbola loza mitatao ara-pahasalamana amin’ny vahoaka Malagasy ny hitranga. Nanaiky ihany izy ireo ka nilamina ny raharaha ka samy namonjy ny fodiany ny tsirairay. Tsy ity tranga tao Tanambao V ity ihany no matin’ny pesta tany an-tranony ny talata io fa teo koa ny tovolahy iray monina any Antanandava Toamasina Suburbaine. Efa nanaraka fitsaboana ihany izy ity saingy nitsoaka ny hopitaly kosa ka izao maty tsy nahatody fitsaboana natao tamin’ny noho pesta nanjo azy izao, izay tokony haharitra 8 andro sy manao tsindrona 48 isa ihany koa. Eo am-pikarohana ny “Tuc-Tuc” nitondra azy sy izay mety iray Dia taminy ny mpitandro ny filaminana izao mba hanaraka ny fitsaboana sahaza azy izy ireo.